I-Madrid iletha ubuhlungu obukhulu ku-Liverpool | Scrolla Izindaba
I-Madrid iletha ubuhlungu obukhulu ku-Liverpool
Njengoba benza ngoNhlaba ngowezi-2018 kowamanqamu e-UEFA Champions League e-Kiev, i-Real Madrid ishaye i-Liverpool iphindelela. Ishaye leli qembu laseNgilandi ngamagoli amathathu kwelilodwa emdlalweni womlenze wokuqala wama-quarter final ngoLwesibili ebusuku e-Estadio Alfredo Di Stefano.
Amaphutha amabi kaLoris Karius anikeze i-Real Madrid indebe ngemuva kokudlalisa uGareth Bale kabi kanye negoli likaKarim Benzema.
UBrazil Vinicius Junior ushaye igoli elivela kwi-cross kaTony Kross nephutha likaTrent Alexander-Arnold linikeze uMarco Asensio igoli.
I-Liverpool ibuye ngamandla esiwombeni sesibili yaklonyeliswa ngegoli likaMohamed Salah, owashaya isicupho se-offside.
Ubuthakathaka bokuzivikela be-Liverpool buvumele uVinicius Junior ukuthi athole igoli lakhe lesibili kanti elesithathu le-Real Madrid noLuca Modric ongumhlinzeki.
I-Real Madrid izohamba namagoli amathathu emlenzeni wesibili e-Anfield ngesonto elizayo ngenkathi i-Liverpool izobe ihamva ngegoli lasekuhambeni ukuguqula isimo.
Umphathi we-Liverpool uJurgen Klopp utshele i-BT Sport ukuthi kufanele uthole ilungelo lokungena kuma-semi final.
“Sikwenze kwaba lula kakhulu kubona futhi asizange nje sidlale ibhola elihle,” kusho uKlopp.
Khonamanjalo, i-Manchester City esefomini ishiye sekuhlwile ukushaya i-Borussia Dortmund ngamagoli amabili kwelilodwa komunye umdlalo womlenze wokuqala we-UEFA Champions League e-Etihad Stadium eDolobheni lase-Manchester.
Umdlali ovelele wosuku uPhil Foden ushaye into ebonakale iyigoli lokuwina le-City futhi wasiza iCity ukuthi ilisebenzise kancane emlenzeni wesibili.